Kedu ihe kpatara Sony “ji nyefee” ikpe ahụ na Sony Reader PRS-T3? | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Villamandos | | ndị na-agụ akwụkwọ, Sony
Izuụka gara aga Sony gosipụtara ya eReader ọhụrụ na-ekwe nkwa ọhụrụ na-akpali ndozi na nke o mere baptizim fọrọ nke nta a omenala dị ka Sony Reader PRS-T3. N'ime ngwaọrụ ọhụrụ a anyị enyochala ọtụtụ akụkụ ya dịka nkọwa ma ọ bụ njirimara mana ụbọchị ọ bụla gafere m na-ajụ onwe m ajụjụ m na-enweghị ike ịnye azịza siri ike.
Ajuju bu nke n’enye isiokwu a; Kedu ihe kpatara Sony “ji nyefee” ikpe ahụ na Sony Reader PRS-T3? na nke m kwuru na enweghị m ike ịnye gị azịza mana site na isiokwu a, m ga-anwa ịbịaru ụfọdụ nkwubi okwu.
Ma ọ bụ na ọ bụrụ na Amazon enweta uru ya site na ire ọdịnaya dị iche iche dijitalụ, Sony na-enweta uru ya niile site na ire nke ngwaọrụ ya na ihe gbasara PRS-T1 na PRS-T2 site na mkpuchi ha dị iche iche, dị ezigbo mkpa ma ree ya na mgbe ụfọdụ ọnụ ahịa mkparị.
Site na mbata nke Sony Reader PRS-T3, mkpuchi ahụ abanyelarịrị na akwụkwọ elektrọnik ya mere ọ gaghị adị mkpa iji nweta ya na ihe Sony tụfuru otu n'ime isi ego ya, nke siri ike maka m ịghọta ebe ọ bụ na ọ nweghị ụlọ ọrụ dị na ahịa ọgụgụ dijitalụ na-enye ikpe na ngwaọrụ ya ma anaghị m ahụ ihe kpatara ya a banyere Japanese kwesịrị inye ya.
Echere m na ọ nwere ike ịbụ ụzọ isi dị iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mana ọnwụ dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na, dịka ọmụmaatụ, ikpe Sony Reader PRS-T2 bara uru n'etiti 35 na 50 euro dabere na ụdị ahọrọ.
Nkwubi okwu a nwere ike ịbụ Sony anaghị echebara uru nke ahịa eReader anya, O yikarịrị ka ọ bụ nkwubi okwu ma ọ bụ na uru ndị ngwaọrụ ndị a na-enye dị ukwuu nke na ị naghị eche maka ịnye ndị ọrụ gị ihe mkpuchi dị na ngwaọrụ ahụ.
Kedu ihe ị chere mere Sony ji kpebie itinye mkpuchi na Sony Reader PRS-T3 ọhụrụ ya?.
Ozi ndị ọzọ - Kindle Paperwhite Vs Sony Reader PRS-T3, debutante duel
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Kedu ihe kpatara Sony “ji nyefee” ikpe ahụ na Sony Reader PRS-T3?
enwerem sony dijo
sony nwere ohere ole na ole n’ahịa ma gbalịa ịbawanye ha?
Zaghachi na m nwere sony
O nwere ike ịbụ na e mere onye na-agụ akwụkwọ ahụ na ya site na mmalite.
Ma ọ bụ na ọnụahịa nke ikpe ahụ abanyela na ọnụahịa nke onye na-agụ akwụkwọ.
Ma ọ bụ na ọ bụ ihe iji dọta uche wee sị: «- Na Amazon ha anaghị enye gị ikpe ahụ ma anyị na - eme ya.»
Echere m na ọ nwere ike ịbụ usoro nke atọ.
Ọfọn, o doro anya na ikpe ọ na-enye enweghị ọkụ, na ngwaọrụ n'onwe ya enweghị ọkụ ọkụ ọkụ na na a ga-ere ikpe ahụ na ọkụ mpụga iche iche maka euro 50, yabụ na ịnweghị ike iji ikpe dị ugbu a gụnyere. Ngwaọrụ ahụ na-efu euro 150. Nke ahụ bụ, ya na ọkụ gụnyere = 200 euro. Nke ahụ bụ ihe m chere na ha ga-eme.
M chọrọ na-eche na «mkpuchi» nwere anwụ ngwa ngwa n'oge x…. Kedu nke, na ọkara oge, ọ bụrụ na ị ga-emepe ma mechie akwụkwọ ọtụtụ oge, ebe ọ bụ na agụpụtara ya na ọnọdụ ụra mgbe ịmepe na mmechi, ka ị na-agbapụ mkpuchi, ị nwere ike ịtụfu akwụkwọ ahụ.
Echere m na ihe karịrị mgbanwe na ụdị nke e-agụ, nke si na obere ihe m nwere ike na-edebe, na ihuenyo sharpness bụ obere ukwuu karịa ya gara aga nlereanya, na sentimita asatọ na-belatara a bit, nke yiri ka ihe obere ma buru obere.
Ọzọkwa Spanish dictionary na-ike (Eche m na ọ bụ n'ihi onye ọrụ ina), ọ bụ ezie na nkwado ya akwụkwọ maka akwụkwọ ka na-adịghị adị.
Echere m na ọ nwere uru na site na iji "ikpe" na kwa "oghere maka kaadị micro-sd" na azụ (ha bụ obere nkọwa abụọ ha na-ere), yana ihe karịrị otu @ nke ndị nwere agabigala ụdị ha gara aga Anyị ga-agba agba ... n'ihi na onye na-agụ akwụkwọ a ka "dị oke njọ", n'agbanyeghị na ọ fọrọ nke nta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye bu ya ụzọ, bụ PRST2.
Site n'ụzọ, ọ na-achọ ịmata na na weebụsaịtị Mediamark, a na-ere ihe atụ nke PRST3 na-enweghị mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi (na-enweghị mkpuchi, echere m na ọ gosipụtara), ụdị "amachi" nke 99 euro ... nke ... bịara na-enweghị mkpuchi, na Ihe na-atọ ọchị bụ na n'ime oge dị mkpirikpi ha mezie site na ịgbakwunye "ikpe na mmụba ọnụahịa" (Sony PRST149 e-agụ dị gburugburu 159 ruo 3 euro, dabere na ebe anyị zụrụ ya ). Na nke a, ahụrụ m na ha gbalịrị ịre ahịa - nwalee nke mbụ, yana ihe na - adịghị agbanwe agbanwe - yana uru nke 99 ruo 149 euro na nkezi, echere m na ọ bụ uru, karịa mmesapụ aka. Anaghị m ahụ a nnukwu ọnwụ, dị ka "aka uwe" bụ onye osompi na Amazon.
Kama nke ahụ, ahụrụ m na Sony na-ejide "bekee" ahụ maka Sony, n'ihi na ọ na-eri ma sie ya "ikpe" n'onwe ya na enweghị ndị nnọchi anya ya, na ha na-enweta uru sitere n'okwu ahụ.
Mgbe ndị izizi Sony gụrụ, ha nwere ọnụ ahịa karịrị akarị (ọ naghị adị ọnụ ala ikwu), mana nke m, agaghị m agbanwe ya maka ndị na - agụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ.
The ìhè n'ezie adịghị enye oké doo anya na a ikpe ... Echere m na-agụ na a kwesịrị ekwesị ìhè isi bụ mma ka nwere na-ahapụ anya gị na ihe "ngwa anya Obere-lens", nke na-enye gị ụfọdụ ìhè na-agụ.
Aghọtara m na mkpuchi ahụ dị mkpa, mana echere m na ha emetụtala nnukwu ihe mgbaru ọsọ site na "ijikọ ihe mkpuchi-agụ" n'ime otu mkpọ ... ebe ọ "na - agbanye" ma ọ bụ na - atụgharị mkpuchi ... ọ naghị agakọ peeji a na - agụ ya. akwụkwọ, si otú a ... M ga-arapara na PRST2 wee lee anya, a na m eche maka ya ụbọchị, mana ... ọ naghị edo m anya.
Ihe ndọghachi azụ ọzọ m na-ahụ, bụ na na PRICE nke onye na-agụ ya nwere, ọ ga-enwe ike ịbịa chaja ugbu a (Achọrọ m ihe nkwụnye ọkụ, n'ihi na ụgwọ ya otu h…. Nke enwe na ọbọgwụ ọzọ) yana na nsọ nsọ, ma ... ha nwere ike mechie ahịa òkè karịa, na mgbakwunye na ndozi emejuputa atumatu, na ugbu a ADAPTER.
Echere m na ha na-enye anyị dị ka "ụmụaka", caramelito site caramelito ... ma si otú a na-azụ ahịa.
Onye ọ bụla na-adọrọ nkwubi okwu ya ...
Na ihe mkpuchi bụ ihe nzuzu. Enweela m ya kemgbe March ma ọ dịla njọ, na anaghị m ewepụ akwụkwọ ahụ n'ụlọ, ọ bụ naanị oge ezumike a na ezumike. Ngwanu, azutala m ozo na ebay.